Haikus: kedu ihe ha bụ, ihe ndị ọzọ na ndị ọzọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Gịnị bụ haikus?
Obere akwukwo a na-amalite ọdịiche na-ebuwanye ibu na predilections nke ndị na-agụ ya na ndị edemede ọhụụ ekele maka oghere thatntanetị nke na-enye anyị ohere ịzọpụta obere micro-akụkọ ndị ahụ, amaokwu na uri iji kpalite ihe onyonyo, mmetụta ma ọ bụ ihe ngọpụ dị mfe iji gbapụ.
Otu ihe atụ kachasị mma nke ahụ ọkụ a maka micro na nke ọtụtụ n'ime gị ga-amata, bụ haiku (俳 句), nke a makwaara dị ka haiku, ụdị nke oge ochie Japan uri n'ozuzu dabere na mejupụtara amaokwu atọ nke 5, 7 na 5 nkeji okwu, Western ntụgharị nke 17 blackberry metric ji nke mbụ haiku mee ihe. Offọdụ n'ime ihe ndị ọzọ achọrọ ka a chọọ n'ụdị akwụkwọ akwụkwọ ọwụwa anyanwụ gụnyere ihe a maara dị ka kigo (季季語), okwu nke na-ezo aka n’oge dị n’afọ ma ọ bụ n’uche mgbe nile ịbịaru nso okike.
Ebe ọ bụ na narị afọ nke iri na asaa Haiku ghọrọ onye ama ama dịka ụdị ngosipụta nke okpukperechi Zen nke ndị Japan ekele maka nna ukwu BashöỌtụtụ ndị ode akwụkwọ anọgidewo na-emegharị mita mbụ ahụ ebe ndị ọzọ gbanwere ya ntakịrị, na-amụ haikus na ntụnye aka na isiokwu ndị ọzọ ma mejupụta amaokwu nwere mkpụrụedemede karịa.
Olee otú haikus si malite
Isi mmalite nke haikus metụtara okpukpe na Ancient China. N'oge Buddha, okpukpe Confucius, na Tao, ha ghọrọ ndị a ma ama dị ka ụzọ isi na-agakwuru ndị ọzọ ma na-ekpughe echiche. Agbanyeghị, ọ bụ n'ezie na narị afọ nke iri na isii mgbe ha bidoro ịmatakwu nke ọma n'ihi Matsuo Bashoo, otu n'ime ndị nnọchi anya amaokwu ndị a.
O doro anya na, haiku bụ ụdị nke Haikai, nke bụ abụ nke 36, 50, ma ọ bụ 100 amaokwu ndị edepụtara n'otu ìgwè, ya bụ, n'etiti ọtụtụ mmadụ, onye na-ede uri na ụmụ akwụkwọ o nwere. Nke mbu gha dee amaokwu 3, 5-7-5. A na-akpọ ndị a Hokku. Nke abụọ, ọ ghaghị ime amaokwu abụọ nke 7-7 na ya na ndị ọzọ niile, na-enye Haikai akwụkwọ zuru oke nke yiri ka ọ bụ naanị otu aka dere.
1 Etu esi dee haiku: ihe di omimi
1.1 Ihe metrik
1.4 Mepụta mmetụta
2 Dee haikus: otu esi eme ya
2.1 Gụọ haikus
2.3 Na-agwa ihe
3 Nhọrọ nke haikus a ma ama
Etu esi dee haiku: ihe di omimi
Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị ịmụ etu esi eme haikus, ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ ihe ndị dị mkpa (na ihe e ji amata) haikus. Ndị a bụ:
Ihe mejupụtara haiku bụ amaokwu atọ. Nke mbụ nke 5 nkeji okwu, nke abụọ nke 7 na nke atọ nke 5. Na ngụkọta, a ga-enwerịrị nkeji iri na asaa. Nke a bụ kpochapụwo haiku, ọ bụ ezie na n'oge a, a na-ahapụ ya ka ọ gbanwee obere n'etiti amaokwu ahụ. Ugbu a, ngụkọta ka dị 17.
A kigo ọ bụ n'ezie ntinye, n'ime oge, nke oge nke afọ. Ọ pụtaghị na ị ga-akpọ aha ọnwa ahụ ọ dị, ma ọ bụ na ọ bụ oge opupu ihe ubi, ọkọchị, udu mmiri ma ọ bụ udu mmiri. Ma ihe na-anọchi anya ya: snow, ọkụ, epupụta, okooko osisi ...
Enwere ọtụtụ haikus, ha niile bụkwa isiokwu dịgasị iche, mana ndị ochie jiri okike dika ihe di mkpa na ihe okike ha. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịde ederede dị ka nke “mbụ” dị ka o kwere mee, chee echiche maka ihe okike.
A haiku abụghị nchikota okwu dabara nke ọma na ọ bụ ya. Ha kwesiri itinye aka na onye na-agu akwukwo ma mee ka obi di ha nma mgbe ha guru ya. Ọ bụ ya mere o ji esiri ike ide haikus dị ezigbo mma, n'ihi na ị ga-ahọrọ okwu ndị a kapịrị ọnụ ma nye ha mmetụta ka ndị mmadụ wee nwee mmetụta na ha.
Dee haikus: otu esi eme ya
Ugbu a ị matara ihe ndị ahụ, oge erugo itinye ha n'ọrụ. Nke mbụ, adala mbà ma ọ bụrụ na ndị nke mbụ apụtaghị, ma ọ bụ jọọ njọ, n'ihi na ị ga-aga n'ihu iji meziwanye. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ihe ị ga - eme.
Mgbe onye edemede chọrọ ide ihe, ọ ga-ebu ụzọ nwee ntọala, nke a na-enwetakwa site na ịgụ akwụkwọ akụkọ na ọrụ metụtara agụụ ya. Otu ihe a na-aga maka haikus. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ide ha, nke mbụ ị ga-agụ ọtụtụ iji hụ ịdị mkpa ha.
Atụla egwu ịbụ onye onye edemede dere. Na nke izizi ga - eme, mana nke nta nke nta, ị ga - akowapụta onwe gị ma mepụta ihe niile dị na mbụ.
Gịnị ka ọ na-adị gị ma ị hụ ka mmiri ozuzo na-ada? Na mgbe ị na-ahụ ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ọdịda anyanwụ? Mgbe ụfọdụ, ihe kwa ubochi adighi eme anyi obi uto, ma anyi n’ahu ha. Ya mere, ịtụgharị uche n'ịchọ mmetụta uche ahụ nke na-enyere anyị aka ime haikus.
Dịka ọmụmaatụ, ụbọchị igwe ojii nwere ike ịpụtara ụfọdụ uju, mana nye ndi ọzọ ọ bụ obi-ụtọ; oyi nwere ike ịpụta obi ọjọọ, kamakwa ịbịaru ndị ọzọ nso.
Anwala ịchọta amaokwu dabara na ha ma ọ bụrụ na ha agụghị ha ọnụ. Ọ bụ ihe kacha njọ i nwere ike ime. Kwesịrị ịmepụta obere akụkọ na amaokwu atọ ahụ na-akpali akpali na na, na mgbakwunye, ọ bụ dum na a akụkọ.
Nhọrọ nke haikus a ma ama
N'ikpeazụ, ebe a ka anyị hapụụrụ gị ihe atụ ndị ọzọ nke haikus a ma ama ka i wee nwee ike ịmara onwe gị na ha.
Gịnị mere ọ ga-eji dị
Kedu ihe m na-eme agadi na ọdịda a?
Nnụnụ na-agabiga igwe ojii.
Ọbụna a obi,
na ụwa nke na-akpụ akpụ,
Ọ bụ ụlọ bebi.
Ọgwụgwụ nke afọ.
Mgbe niile otu okpu
na otu akpụkpọ ụkwụ ahịhịa!
N'oge udu mmiri
Alachaala m alaka
ma dokwuo anya
Site na windo.
Uko ụlọ ọkụ:
Enwere m ike ịhụ ọnwa
ọ mara mma
naanị obi abụọ ga-abanye
na ha nwere igodo.
Naanị n'ihe ndina
Anụ m na-anụ anwụnta
N'abụ abụ olu ụtọ
Childrenmụaka na - abịa -
Ha na-eburu m n’elu àkwà
Maka ọrụ m
Abụ nke uguisu
Agara m n’ili ya na Kiso.
Imepe ọnụ ụzọ ga-egosi Buddha
Ifuru nwa osisi
Ha jiri aka ha tụọ aka -
Onmụaka ke ụkwụ
ọnwa na-amasịkwa ha.
na-atụ egwu ya echiche
akara ukwu nke clogs.
Site na igwe ojii
e nwere ụzọ mkpirisi ọnwa.
Ọ bụghị otu akwukwo
Ọbụna ọnwa adịghị ehi ụra
Na willow a
Horsesnyịnya na-agba ịnyịnya
Ha na-esi isi nri ha
A senti nke violet
Eri na eriri azu
Ọnwa na-atụ n’oge ọkọchị
m icha mmirimmiri echiche
Ihe niile anyị na-anakọta
n'ụsọ osimiri na obere mmiri-
Enweghị nwa ịbịaru nso
Ha na-ajụ oyi
Na ndagwurugwu na ugwu
Ihe niile dị ka enweghị ike imegharị
Morningtụtụ a snowy
Ọ bụrụ na ha emechie n'ụtụtụ
na-acha anụnụ anụnụ na oge ntoju.
Ọ bụ n’ihi ịkpọasị nke mmadụ!
N'oge opupu ihe ubi
Ha mara mma karịa
Alaka osisi pọm
to onye lanụ.
Site na violet nke ígwé ojii
Na-acha odo odo nke irises
Echere m echiche.
ọ na -abịa.
Ebe lere anya ọnwa
Ana m aha ndụ a
Mmiri na-eti mkpu
Ọkụ ọkụ na-apụ
Onweghi ihe dị
Igwe ojii na elu ugwu
Ahiegwurugwu na-amali elu na ndagwurugwu.
N'okpuru kpakpando kpọnwụrụ akpọnwụ
My scythe kụrụ n'ili
Puku puku obere azụ ọcha
Dị ka a ga-asị na ọ sie
Na-ala azụ, rosebush.
Site na mkpụrụ ahụ?
cheta ihunanya taa
N'abalị ikpeazụ m kpuchie
ụmụ m na-ehi ụra
na mkpọtụ nke oké osimiri.
Igirigi na-agba ọsọ.
N'ụwa a rụrụ arụ
Enweghị m ihe ọ bụla.
Kasị njọ nke nkuzi mgbamejije
ọ bụ na ọ na-ekwu otu ihe
ime ihe ike.
Ihe dị egwu.
na-akasi gị obi.
Mere nke ikuku
n’etiti osisi paịn na nkume
mgbe mmiri na-ezo.
Na-agafe na akwa ya
ọnwa a chapuru achacha
nwere ududo anya.
dikwa n’elu ifuru
n'elu mmiri ọdọ mmiri
Ihe na-acha ọcha chrysanthemum
anya adighi enweta
nwetụrụ adịghị ọcha
Iji isi piom
na uzo ugwu
Mmiri, site n'aka Bashö
kpuchie n'ụtụtụ a
Mgbụsị akwụkwọ dị ebe a:
sachapụ mkpụrụ vaịn.
Na-anwa anwa ịkọrọ nke gị ma ọ bụ ọkacha mmasị haikus?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Gịnị bụ haikus?
Roberto Soto dijo
Borges dere "mkparị" Lee, i bu onye nzuzu.
Zaghachi Roberto Soto
Abu abu bu nka bu nka nke ikwu ihe mmadu na acho, ichoputa, guo, aguo, obu soso ndi na-aghotaghi uri a. Ihe nzuzu nke anyi nile na ede, karicha ndi na-eme ka ha atule ihe anyi dere.
nkà nke ide ihe
ụzọ dị ogologo ma ọ dị mkpụmkpụ nke a bụ haiku
Benedetti si haiku bụ nke kachasị mma
Grande Benedetti. A ga-agba m ume ide otu ma zipu ya
John Haiku dijo
Iszọ dị ogologo? Gịnị bụ Carlos? Kedu ihe ọ bụ?
Zaghachi Juan Haiku
Hụ ịhụnanya n'anya dijo
a na-ekpuchi onyinyo ọ bụla
nke ịgbachi nkịtị ya.
Zaghachi Ame Ame Ame
Marco Ortega dijo
maze ndi ozo
Ọ bụ ehihie
Zaghachi Marco Ortega
Uzo nke oge
Akwụkwọ akụkọ 6 nwere oji na egwu metụrụ ahọrọ maka July